एमसीसी पास गर्न देउवा-ओलीबिच गठबन्धन, अमेरिकाको दियो घुमाउरो दबाब ! - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
एमसीसी पास गर्न देउवा-ओलीबिच गठबन्धन, अमेरिकाको दियो घुमाउरो दबाब !
एमसीसी सम्झौता संसदबाट पास होला कि नहोला भन्ने ठूलो चासो जनमानसमा छ। केही राजनीतिक दलहरुका लागि यो प्रस्ताव घाँडो बनेको छ, भने दलहरुबीचको मतान्तरका कारण केही गिजोलिएको पनि छ।
एमसीसीको विषयलाई लिएर जारी विवादले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि दबाब बढेको छ। एमसीसीका सम्बन्धमा बढेको तनावका कारण नेकपा माओवादी केन्द्रका,
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’‘थाल खाउ की भात खाउ’को अवस्थामा पुगेका छन्। केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्न काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई अघि सारेका उनी अहिले देउवाले,
अघि सारेको एमसीसी सम्झौता सहमत हुन सकेका छैनन्। गठबन्धन टिकाउन देउवासँग सहमत भएर एमसीसी पास गर्न सघाउनु पर्ने देखिन्छ। तर पास गर्न सघाए विगतदेखि नै लिदै आएको एमसीसी विरोधी अडान बेच्नु पर्नेछ।
त्यसबाहेक गठबन्धन भत्किएर ओली–देउवाको समीकरणमा मुलुक अर्लि इलेक्शनमा जाने सम्भावनामाथि पनि विश्लेषण भइरहेका छन्। दुवै सम्भावना प्रचण्डका लागि कठिन मात्रै होइन, निल्नु न ओकल्नु’ नै बनेको छ।
एमसीसी पास गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दबाब देलान् कि भन्ने चिन्तामा माओवादी केन्द्रका नेताहरु छन्। यथास्थितिमा पास गर्न नसक्ने विगतदेखिकै अडानलाई कायम राखेर अघि बढ्न प्रचण्डलाई नेता कार्यकर्ताहरुले सुझाइरहेका छन्।
यसका लागि गठबन्धननै त्याग्न परेपनि पछि हट्न नहुने कतिपय नेताको तर्क छ। तर प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीले गठबन्धन नै भत्काएर अघि बढ्न तयार भए एमसीसी पारित गर्न सहयोग गर्ने सन्देश देउवालाई दिएको छन्।
एमसीसी सम्झौता जतिसक्यो चाँडो अनुमोदनको पक्षमा रहेको अमेरिकाले केही समय पर्खिन सक्ने निर्णय लिएपछि प्रधानमन्त्री देउवा गठबन्धनमा दबाब दिएरै भएपनि यो प्रस्ताव पास गर्ने तयारीमा देखिन्छन्।
सम्झौता पास गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध भएको भन्दै मंसिर २८ मा सम्पन्न एमसीसी बोर्ड बैठक आशावादी बनेको थियो। त्यसअघि प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसीको मुख्यालयमै पत्र लेखेर,
सम्झौता अनुमोदनका लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको विश्वास दिलाएका थिए। सभामुखको विदेश भ्रमणको मौका पारी सरकारले संसद् बैठक आह्वान गरेको छ। पुस ६ मा बस्ने संसद बैठकमा,
एमसीसी प्रवेश गराउने चाहना सरकारको देखिन्छ। यति भएर पनि सभामुखले एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबुल गराउने नगराउने टुंगो छैन। सभामुख अग्नी सापकोटाको भूमिका प्रचण्डका लागि अनुकुल हुन सक्छ।
सत्ता साझेदार साना कम्युनिष्ट दलहरुभन्दा शक्तिशाली प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग मिलेर सम्झौता पास गर्न प्रधानमन्त्रीका लागि बढी सहज छ। यसका लागि देउवाले गठबन्धन,
भत्काएर ओलीसँग सहकार्य गर्न तयार हुनुपर्नेछ। यस्तो अवस्था सिर्जना हुँदा एमसीसीमा मात्रै प्रभावित हुने होइन सत्ता समिकरण र आगामी निर्वाचन समेत प्रभावित हुनेछ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता नेपालको संसद्बाट आगामी तीन महिनाभित्र पनि अनुमोदन नभए फिर्ता लैजाने भएको छ ।
ऊर्जा र सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता गरेको चार वर्ष पूरा भइसक्दा पनि दलहरूबीच मतभेद हुँदा संसद्बाट पास हुन सकेको छैन।
अमेरिकाले सडक पूर्वाधार र ऊर्जाअन्तर्गत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ५० करोड अमेरिकी डलर दिने सम्झौता गरेको थियो। एमसीसी अनुमोदनका लागि अमेरिकाले नेपालसँग पटकपटक आग्रह गरिसकेको छ।
इन्डो प्यासेफिक रणनीतिअन्तर्गत एमसीसी अनुमोदनका लागि गत सेप्टेम्बरमा एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा जी सुमार र नोभेम्बरमा अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित सत्तापक्षीय दल र प्रमुख,
प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरिसकेका छन्। भेट गरेका नेताहरू अधिकांशबाट समान खालको धारणा आएपछि अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डल विश्वस्त भएर फर्केका थिए।
गत महिना मात्रै नेपाल आएका अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री लुले नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई २८ मंसिरसम्म एमसीसी अनुमोदन गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएका थिए।
२८ मंसिर अर्थात् १४ डिसेम्बरका दिन अमेरिकाले एमसीसी बोर्ड बैठक डोकेको थियो। जसको ४ नम्बर एजेन्डामा नेपालको एमसीसी कम्प्याक्टको विषय राखिएको थियो।
एमसीसी बोर्ड बैठककै दिन पारेर नेपालमा संसद् आह्वान भए पनि २८ मंसिरमा एमसीसीलगायतको विषय एजेन्डामा राखिएन। बरु एक दिन संसद् बैठक बसेर सात दिनका लागि बैठक स्थगित भयो।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्तापक्ष दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संयुक्त रूपमा एमसीसीलाई पत्र लेखेर अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको कुरा प्रधानमन्त्री स्वयंले सार्वजनिक गरिसकेका छन्।
सो कुरा १४ डिसेम्बरमा अमेरिकाको वासिंटन डिसीमा भएको एमसीसी बोर्ड बैठकले नेपाल सरकारले एमसीसी कम्प्याक्ट चाँडै अनुमोदन गर्ने भनी जनाएको प्रतिबद्धतालाई जानकारीमा लिएको छ, भनी गत बुधबार विज्ञप्तिमार्फत उल्लेख गरिएको छ। इमान्दार मेडिया बाट